शानदार शतक प्रहार गर्दै विराट आउट, अब खेल कसको पक्षमा? - Everest Dainik - News from Nepal
शानदार शतक प्रहार गर्दै विराट आउट, अब खेल कसको पक्षमा?
काठमाडौ, फागुन २४ । अष्ट्रेलियाले दिएको ३१४ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा भारतले छैटौं विकेट गुमाएको छ । छैटौं विकेटका रुपमा भारतले कप्तान विराट कोहली (१२३) लाई गुमाएको हो । उनलाई एडम जाम्पाले क्लिन बोल्ड गरे । यो समाचार तयार पार्दासम्म भारतलाई अब जितका लागि ८५ रनको खाँचो छ ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकपः आज पनि शतक बनाउन चुके कप्तान कोहली